News - Nkọwa nke ihe ọmụma bụ isi banyere ịkpụzi ọgwụ
Nkọwa nke ihe ọmụma bụ isi banyere ịkpụzi ọgwụ
Igwe na-akpụzi ọgwụ bụ igwe pụrụ iche maka imepụta ngwaahịa plastik, nke a na-eji arụpụta akụkụ plastik dị iche iche na akụrụngwa, ọgwụ, ndị ahịa na ngwa ụlọ ọrụ. Ọgwụ na ịkpụzi bụ a na-ewu ewu Usoro n'ihi na nke na-esonụ ise:
1. Ikike iji nwekwuo arụpụta ihe;
2. Enwere ike ime ma odidi di mfe ma di nkpa;
3. Ezigbo njehie;
4. Enwere ike iji ihe dị iche iche mee ihe;
5. Ego pere mpe ihe oriri na ego oru.
Igwe ọgwụ na-akpụnye ọgwụ na-eji resin plastik na ebu mee ihe iji mezue ịkpụzi ọgwụ. A na-ekezi igwe ahụ ụzọ abụọ:
Ngwa ngwa ngwa - mee ka ebu mechie na nrụgide;
Ọgwụ ọgwụ-agbaze plastic resin na ramming wụrụ awụ plastic n'ime ebu.
N'ezie, igwe ndị ahụ dịkwa na nha dịgasị iche iche, kachasị nke ọma iji mepụta akụkụ nke nha dịgasị iche iche, ma jiri ike ijikọ aka na igwe ịkpụzi ọgwụ nwere ike iwepụta.
A na-ejikarị aluminom ma ọ bụ ígwè mee ihe ahụ, ma enwere ike ịnweta ihe ndị ọzọ. E kewara ya na abuo abuo, ya na udi ya buzi igwe na igwe. Kpụzi ahụ nwere ike ịdị mfe ma dịkwa ọnụ ala, ma ọ bụ sie ike ma dịkwa oke ọnụ. Ihe mgbagwoju anya dika nke oma na nhazi nke uzo na onu ogugu nke ihe obula obula.
Thermoplastic resin dị n'ụdị pellet ma ọ bụ ụdị ihe a na-ejikarị eme ihe n'ịkpụzi ọgwụ. E nwere ọtụtụ ụdị thermoplastic resins nwere ọtụtụ ụdị ihe onwunwe ma dabara adaba maka ngwa ngwaahịa dị iche iche. Polypropylene, polycarbonate na polystyrene bụ ihe atụ nke resins a na-ejikarị. Na mgbakwunye na nhọrọ dịgasị iche iche nke ihe ndị na-enye site na thermoplastics, ha na-enwekwa ike ịmegharị, na-agbanwe agbanwe ma dị mfe agbazekwa nhazi.
Thekpụzi usoro rụrụ ke injection ịkpụzi igwe mejupụtara isii bụ isi nzọụkwụ:
1. Ngwunye-ihe nkedo nke igwe na-eme ka akụkụ abụọ nke ebu ahụ jikọta ọnụ;
2. Ntinye-plastic wụrụ awụ site na ọgwụ mgbochi nke akụrụngwa akụrụ aka n'ime ebu;
3. Nrụgide ịdebe-plastik a wụrụ awụ nke etinyere n'ime ebu dị na nrụgide iji hụ na akụkụ niile nke akụkụ ahụ jupụtara na plastik;
4. Jụrụ-kwe ka plastik dị ọkụ dị jụụ n'ime akụkụ ikpeazụ ka ọ ka nọ na ebu;
5. Ebu mmeghe-ngwaọrụ clamping nke igwe na-ekewa ebu ma kewaa ya na abụọ halves;
6. Ejection-ngwaahịa a rụchara arụpụtara site na ebu.
Ọgwụ na ịkpụzi bụ oké technology na ike ga-uka-emepụta. Agbanyeghị, ọ bakwara uru maka prototypes maka izizi ngwaahịa ma ọ bụ maka ndị ahịa ma ọ bụ nnwale ngwaahịa. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ akụkụ plastik niile nwere ike ịmepụta site na ịkpụzi ọgwụ, na mpaghara ngwa ya enweghị njedebe, na-enye ndị na-emepụta usoro dị oke ọnụ iji mepụta akụkụ plastik dị iche iche.
Nkenke Ọgwụ na ịkpụzi Inc., Mkpa Wall Ọgwụ na ịkpụzi igwe, Nkenke Ọgwụ, Nkenke Ọgwụ na ịkpụzi, Nkedo nkenke, Nkenke Plastic Ọgwụ na ịkpụzi,